२१ खेलाडीको दुई वर्षको तलब आइसिसीले पठायो, कसलाई कति ? « Postpati – News For All
२१ खेलाडीको दुई वर्षको तलब आइसिसीले पठायो, कसलाई कति ?
माघ २६, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसिसी)ले नेपाली खेलाडीको रोकिएको दुई वर्षको तलब एकमुष्ट पठाएको छ।
क्यान विवादले उग्ररूप लिँदै गर्दा आइसिसीले २०७३ वैशाखदेखि क्यानलाई सरकारी हस्तक्षेप र निष्पक्ष नभएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ।
विसं २०७३ वैशाखमा क्यान निलम्बन भएपछि अहिलेसम्म नेपाली खेलाडीले अभिभावकबिनै ठूला प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदै आएका छन्।